Maalinta: Diseembar 3, 2018
Calaamadaha Gaadiidka ee Malatya Sii wad
Dowlada Hoose ee Magaala Xeebeedka ayaa soo gabagabeysay astaamaha iyo saxeexyada shaqooyinka wadooyinka halkaas oo shaqooyinka lagu dhameeyo Malatya. Si loo helo gaadiid ka raaxo badan magaalada oo dhan, Dowlada Hoose ee Magaalada Malatya [More ...]
Duqa magaalada Zihni Şahin, oo ka qayb galay kulanka Agaasimayaasha Agaasimeyaasha Samsun Logistic Village, ayaa yidhi, "Tuulada Loistic waa tusaale maalgashi oo lagu daydo horumarka dhaqaalaha. Waxaan diyaar u nahay inaan gacmahayaga galno dhagaxa hoostiisa. ” Tuulada Samsun Saadka [More ...]
Başpınar-Oduncular (Gaziray) Qandaraaska Korantada iyo Saxeexida Xarumaha Dhismaha Wadnaha Ayadoo ay sabab u tahay hindisada guud ee Tareenka Gobolka (TCDD) 2018 / 471929 GCC xadka qiimaha 188.710.342,37 TL iyo qiyaasta qiimaha ayaa ah 266.005.381,04 TL [More ...]
500 Million Ganacsiga Ganacsiga ayaa ka dhacey Shirkii Ganacsiga ee Bursa
Shirka Wershadaha ee Bursa, 67 42 kun oo 116 soo booqda oo ka socda dalka ayaa soo jiitay xiiso weyn. Shirka ayaa la qabtay iyadoo ay ka soo qaybgaleen shirkadaha 20 iyo wakiillo ka socda waddamada 346. [More ...]
Xilli ciyaareedka cajiibka ah ee furitaanka Palandoken
Xilliga barafka waxaa laga furay Xarunta Palandöken Ski Center. Ka dib wareejinta Dawlada Hoose ee Erzurum iyada oo maalgashina lagu ogaaday qaybta hoose iyo qaab dhismeedka xarunta barafku waxay ahayd goobtii furitaanka xilli ciyaareedyada midabada leh. Dedeman [More ...]
Gaarigan fiilada leh, oo bixiya fursada si uu u safro inta uu ka daawanayo shimbiraha indhaha ee indhaha ah, ayaa dhawaan la isticmaalay. Si kastaba ha noqotee, fayras madax furasho ah oo saameeya nidaamyada xargaha ee waqti aad u yar gudahood [More ...]
Iska ilaali wadayaasha magaalada Istanbul! Kadib furitaanka buundada saddexaad, fasalka 2, ie gawaarida 'wheelbase' ee 3.20'nin ee ka gudbaya buundada labaad ayaa la mamnuucay. Sikastaba, muwaadiniinta aan ka warqabin xayiraada ayaa sii waday isticmaalka buundada labaad, [More ...]
Tareen aan lacag la'aan aheyn
Iyada oo la raacayo tilmaamaha Madaxweynahayaga iyo taageerada dawladahayada, abaabulidda tareenka ee ka bilaabmay 2003 ayaa si isdaba joog ah u socda. Laga bilaabo tareenada xawaaraha sare ilaa casriyeynta khadadka jira, laga bilaabo howlagalada tareenka ee casriga ah iyo kuwa casriga ah. [More ...]
RayHaber 03.12.2018 Warbixinta Shirka
Gaziray Elektarooniga iyo Xarumaha Calaamadaha Waxaa Lagu Dhisi Doonaa Kayarification-Doğançay Nidaamka Korantada Tareenka 1 Dayactirka iyo Dayactirka Shaqada Gaarka ah Amniga Amniga Gaarka ah Waxaa La Heli Doonaa (TÜLOMSA Bar) Bar Tareenka Naafada Gawaarida ee Ankara Subway tareenada [More ...]
Xaqiiqda kale ee waddankeenna oo leh dad firfircoon, wax soo saar leh oo shaqeeya dad badan ayaa ah xaqiiqda ah in qayb weyn oo ka mid ah dadkeenna ay ka kooban tahay muwaadiniin naafo ah. Halkaan, dowladeena, oo mudnaanta koowaad siineysa sinnaanta fursadaha meel walba, [More ...]
1 Xannaano Maalmeedka Maalinta Isku Duubka Maizka-Taşkışla Teleferik
Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Metro Istanbul, khadka gawaarida Maçka-Taşkışla, 03 Diseembar 2018 ma awoodi doono inuu adeego sababtoo ah howlaha dayactirka iyo hagaajinta Isniinta (Maanta). Taksim Taşkışla iyo Maçka [More ...]
48 Liraya Fair Travel Travel with Eastern Express
Turkey ayaa ugu dheer oo ku hawlan in mid ka mid ah adeegga ugu ifaaya tareen Orient Express, ayaa dhameystiraya socdaalka bilaabay in Kars ka Ankara. East Express waxay ka baxdaa Ankara Station maalin kasta 17.55. Maalinta ku xigta ee 18.30 [More ...]